Izizathu Ezi-9 Zokuthi Ukutshala Imali Kwisoftware Yokumaketha Kokudluliswa Kwezimali Kungukutshala Imali Okungcono Kakhulu Ekukhuleni Kwebhizinisi Lakho | Martech Zone
UMsombuluko, May 24, 2021 UMsombuluko, May 24, 2021 Ekalavya Hansaj
Uma kukhulunywa ngokukhula kwebhizinisi, ukusetshenziswa kobuchwepheshe akunakugwenywa!
Kusuka kokuncane umama nepapa ezitolo ezinkampanini ezinkulu, akunakuphikwa ukuthi ukutshala imali kubuchwepheshe kukhokha kakhulu nokuthi abaninimabhizinisi abaningi abasiboni isisindo sokutshalwa kwemali kubuchwepheshe obuphethe. Kepha ukuhlala phezu kobuchwepheshe obuthuthukayo nesoftware akuyona into elula. Izinketho eziningi, ukukhetha okuningi…
Ukutshala imali kwisoftware yokudlulisa efanele yebhizinisi lakho kubalulekile futhi kufanele kube yingxenye ebalulekile kunoma yiliphi isu lokukhula. Kepha ukutshalwa kwezimali kwesoftware yokudlulisa akumayelana nokuthi "ucebe ngokushesha." Kuyinto utshalomali olubalulekile.
Ukubeka imali ekubhekiseni isoftware nobuchwepheshe bokudlulisa kumayelana nokukhulisa ibhizinisi lakho nokukhulisa inzuzo ngokuhamba kwesikhathi. Futhi, ngenkathi lokho kuza ngentengo, kungenzeka ukuthi kuphansi kunalokho ongacabanga.
Ungakwazi yini wena, nebhizinisi lakho ukungakhokhi?
Kuyini Ukutshalwa Kwezimali Zokukhangisa Okudluliswayo?
Wonke umnikazi webhizinisi unakho ukukhetha ukuthi angatshala kuphi futhi kanjani imali yakhe. Lokhu kungaba yinoma yini kusukela ekuthengeni izisebenzi kanye nokuqasha abasebenzi, ukuthenga imishini nemikhiqizo oyisebenzisela ukuqhuba ibhizinisi lakho. Kepha isinqumo sokuthi uzotshala kuphi futhi nini singaba nzima.
Kungakapheli unyaka, izinkampani ezenza ukutshalwa kwezimali kwesoftware yokudlulisa imali zingabona ukukhula okusheshayo kanye nemikhawulo yenzuzo engcono. Kunemikhiqizo eminingi yesoftware yokukhangisa edluliswayo engenza impilo yakho kanye nempilo yabasebenzi bakho ibe lula.
Abasebenzi abajabulayo = ukukhula okwengeziwe!
Nge-software yokudlulisa edlulisayo, akukhona kangako ngokuthi uchitha malini; yindlela oyisebenzisa ngayo. Ufuna okuthile okuhambisana nemibono yenkampani yakho futhi okwenza umsebenzi wakho ube lula futhi ube ngcono? Akudingeki ukuthi kube utshalomali olubalulekile. Konke kuza ekukhetheni okungcono kakhulu.
“Ukutshala imali” kwisoftware yokudlulisela kumane kusho ukuthola amalayisense kusoftware yokudlulisa edingekayo ekusebenzeni kwansuku zonke, ukumaketha noma eminye imisebenzi yebhizinisi. Imvamisa, abanikazi bamabhizinisi baqala ngokuthenga isoftware yokudlulisela abayidingayo ukuze baqhube ibhizinisi ngenkathi belinde ukuthenga amalayisense wesoftware "enhle ukuba nayo" ngokuhamba kwesikhathi.
Ngamalayisense abiza noma kuphi kusuka kumasenti ambalwa kuya ezinkulungwaneni zamaRandi; kanti ezinye zinezindleko zokukhokha okukodwa, kanti ezinye zithola inkokhelo ephuma njalo ngenyanga, akukaze kubaluleke kangako ukukala zonke izinketho ngaphambi kokutshala imali kuma-softwares wokumaketha okudlulisayo.
Ngabe Ukutshala Imali Kwisoftware Yokumaketha Ngokudluliselwa Kusiza Kanjani Ukukhula Kwebhizinisi?
Noma ngabe ungumnikazi wokuqalisa noma uyi-CEO yomsebenzi we-multi-conglomerate, akubona bonke abantu abakholelwa ukuthi ukuzikhuza ekutshaleni isoftware yokudlulisa kukhuthaza ukukhula kwebhizinisi futhi ukuthi kungukutshalwa kwezimali okuphephe kakhulu kunoma iliphi ibhizinisi.
Nazi izizathu eziyisishiyagalolunye ngokusho kukaKirsty McAdam; Umsunguli kanye ne-CEO yomholi wesoftware yokudlulisa, Indawo yokudlulisa ngubani owabelana ngokuthi kungani ukutshala imali kusoftware yokumaketha okudlulisa kakhulu kuyinto engcono kakhulu ongayenza ngecebo lakho lokukhula kwebhizinisi kanye necebo lokumaketha.
Funda Martech ZoneIsiqephu Esiphathelene Nefekthri Yokudlulisa
Isizathu 1: Hlala Phambili Komdlalo Wokudluliselwa
Enye yezinzuzo ezinhle kakhulu ongaba nazo njengenkampani ukuhlala phambili kwabancintisana nabo futhi indlela elula yokufeza lokhu ukuthi ube nesoftware esezingeni eliphakeme kakhulu futhi elula yokusebenzisa ukuhambisa ibhizinisi lakho. Ngcono isoftware yokukhangisa yokudlulisa esetshenziswayo yibhizinisi lakho, izenzo ezincanyana zeqembu okungenzeka ukuthi kufanele lizenze.
Lokhu ekugcineni kusho ukuthi banesikhathi esengeziwe sokusebenza kweminye imisebenzi ebalulekile njengokusebenza namakhasimende nokwenza ukuthengisa. Uma une-tech entsha sha, uzokwazi nokuthola izindlela ezintsha zokweqa ezinye izinkampani - noma ngabe lokho kungamasu wokumaketha wanamuhla, uhlelo olunamandla ngokwengeziwe, noma ukukhiqizwa okuhambisanayo.
Ukuthola umncintiswano emncintiswaneni kusho ukuthi ibhizinisi lakho lizoheha amakhasimende amaningi ngokwemvelo futhi likhulise imali oyitholayo. Cabanga nje ngesikhathi lapho amanethiwekhi omphakathi ethula khona izinkundla zawo zokukhangisa. Lezo ezazisheshe zamukelwa (kusetshenziswa isoftware ehlakaniphile ukwethula izinkulungwane zezikhangiso ezilalelini zazo) zachitha umncintiswano wazo.
Isizathu 2: Ukusebenza Ngokuthuthukile Kokudlulisela
Ukuba nesoftware yokudlulisa engcono kakhulu kusho nokuthi ukwenza ibhizinisi lakho lisebenze kangcono. Ukusebenzisa isoftware entsha yokumaketha yokudlulisela phambili kungahle kuhlanganise ezinye izimbungulu nezinhlungu ezikhulayo, kepha uma usugxuma, ibhizinisi lakho lizochuma. Ekugcineni, umbuzo okufanele uzibuze wona njengosomabhizinisi yilona;
“Ingabe umuntu kufanele akwenze lokhu?”
Imvamisa, siqasha abantu ukuthi benze imisebenzi eyisidina futhi eyisidina, kuphela ngoba kubonakala kuyindlela yokuphikiswa okuncane. Kepha okwesibili lapho siqala ukucwaninga ngezixazululo zale misebenzi yokukhangisa yokudlulisa, sithola ukuthi eziningi zazo zingazenzekelayo ngaphandle kwezindleko. Lokhu kuvumela abasebenzi bethu ukuthi bagxile emisebenzini yokumaketha yokudlulisela engakwazi ukuzenzekelayo.
Abasebenzi bokumaketha abadluliselwe kahle, ukuthi, ngaphezu kwakho konke okunye, bajabule ngokwengeziwe ngokunganikezwa umsebenzi wezwe. Ngokuthenga isoftware yokumaketha efanele, uzothola ukuthi bavame ukukhipha izibuyekezo zokumaketha zokudlulisela. Ukuvuselelwa kwesoftware kuvame ukukhishwa ukwenza insiza isebenze kahle, ukwethula izici ezintsha, nokwenza ngcono isipiliyoni somsebenzisi jikelele (UX).
Ekugcineni, ukuvuselelwa kwesoftware kuzongena phezulu nangaphansi kwesigaba sakho sebhizinisi, okwenza ibhizinisi lakho liqhubeke ngokushelela nangokushesha. Njengoba izinhlelo zokumaketha zokudlulisela zisebenza kahle, amandla emikhiqizo noma amasevisi okukhula ayakhula futhi. Ekwenzeni ibhizinisi lisebenze kahle, udala amathuba amaningi okuthi inkampani yakho ihlangabezane nezimfuno eziningi ezivela kumakhasimende.
Kungcono ukuthi ungasebenzela amaklayenti akho kanye niche; amakhasimende ajabule kakhulu futhi nabantu abahle bazokhuluma ngawe. Ekugcineni, ukusebenzisa kahle ukumaketha kokusebenza kahle kunciphisa umkhawulo wephutha ekukhiqizeni nasezinsizakalweni, okwenza ibhizinisi lakho liqoqe imali engenayo ngokuthuthukisa ukugcwaliseka.
Isizathu 3: Nikeza Ipulatifomu Ebonakalayo Yokukhula Kokumaketha Kokudluliselwa
Ukutshala imali kwisoftware yokudlulisa kuyisinqumo sebhizinisi esiqinile esingakhulisa kakhulu ukukhula. Lapho uqala ibhizinisi - kunoma iyiphi imboni - uvame ukuqala kancane. Ithemba ukuthi uzokhula unomphela, kokubili kwinani lamakhasimende kanye nemali engenayo yenkampani uqobo. Ayikho enye inkambu eyanda njengobuchwepheshe.
Lapho uthatha isinqumo sokuthi yini ozotshala imali ebhizinisini lakho, cabanga ukuthi yini ezoyisiza ikhule ngokushesha okukhulu nangokuqhubekayo. Ngokutshala imali kusoftware yokudlulisa, utshala imali ekuthembekeni kwesoftware yokudlulisa kanye nenkampani yakho.
Isizathu 4: Thola Izinzuzo Zesikhathi Eside Ngokuzibophezela Kwesikhathi Esifushane
Uma utshala imali kwisoftware yokudlulisa, wenza utshalomali lwesikhathi eside lwebhizinisi lakho. Into enhle ngokutshala imali kwisoftware yokudlulisela ukuthi izinzuzo zingahlala iminyaka. Njengoba isoftware yomuntu wesithathu otshala imali kuyo ithuthuka ekusebenzeni nasekusebenzeni kahle, ikhula ngenani kanye nokuphila isikhathi eside.
Yize ubuchwepheshe bungewona umkhakha ozinze kakhulu, ngulowo okhula njalo. Ukutshala imali kwisoftware evuselela izinqubo zebhizinisi lakho akuvamile ukuba kube yisinqumo esingalungile.
Ukutshala imali kwipulatifomu yesoftware yokudlulisa - Ukuthenga kufayela le- Ukudluliswa kohlelo lwesoftware noma i-SaaS isho ukuthi ubeka isisekelo sempumelelo yebhizinisi lakho. Imali oyisebenzisayo manje izokhula ngenani njengoba ibhizinisi lakho lisizakala ngotshalomali.
Isibonelo, utshalomali olwenza unyaka wonke ohlelweni lwesoftware yokudlulisa noma i-SaaS ingakhipha izinzuzo eziphakeme kakhulu kunokutshala imali kusisebenzi esisebenzela inkampani yakho isikhathi esingaphansi konyaka kuphela. Ingeniso yabasebenzi inezindleko ezinkulu ezihambisanayo. Ngesoftware yokudlulisela, leyo akuyona inkinga.
Isizathu 5: Ukugcinwa Kwamakhasimende Okuthuthukisiwe
Ngokutshala imali kwisoftware yokudlulisela, ungabona ukuthuthuka okukhulu ekuxhumaneni kwamakhasimende-nebhizinisi. Ngenxa yezinqubo zayo ezakhelwe ngaphakathi, isoftware yokumaketha yokudlulisa ivame ukuthuthukisa ukuxhumana namakhasimende ngokwemvelo.
Noma ngabe kwenziwa nge-imeyili noma ngemidiya yokuxhumana nabantu, ukutshalwa kwezimali kwisoftware yokudlulisela kukunikeza izindlela eziningi zokufinyelela izethameli zakho ezihlosiwe. Ngokulandelayo, ibhizinisi lakho lingakhula ngokwakha nokuhlakulela ubudlelwano obuhle namakhasimende akhona nalawo angahle abe khona. Isoftware yokudlulisa edlulisa futhi inika ithuba lokwenza ngcono ubudlelwane phakathi kwamabhizinisi.
Uma wenza ukukhetha kokutshalwa kwezimali kokudluliselwa kwesoftware unolwazi, uzokwakha ubudlelwano bobuchwepheshe nenkampani oyikhethayo. Futhi uzokwazi ukuxhumana nokuxhumana namanye amabhizinisi asebenzisa ubuchwepheshe obufanayo noma obufanayo.
Ibhizinisi liphathelene nobudlelwano obuzuzisayo nokuthola izindlela zokwandisa nokuhlukahluka. Uma usebenzisa lokho kuxhuma ekuzuziseni, zombili izinkampani zingabona ukukhula okukhulu nokuqamba. Ngesinqumo esisodwa sezezimali, ungavula iminyango yakho kusethi entsha yokuxhuma ebikade ingekho etafuleni ngaphambili.
Isizathu 6: Khulisa Ukukhiqiza Kwakho
Ngokuhambisana nokusebenza kahle, isoftware yokumaketha efanele ingakhuphula umkhiqizo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma isoftware yokudlulisa oyitshale imali yenza lula ama-SOP akho amanje futhi inikeze izinqubo ezithile zebhizinisi ezizenzekelayo. Ngokuya ngokuthi iyiphi isoftware yokudlulisa okhetha ukutshala kuyo, cishe uzothuthukisa umkhiqizo wezinhlelo zakho nabasebenzi.
Inkampani ehleleke kakhudlwana ikhiqiza ngevolumu ephezulu, enephutha elincane lomuntu. Ibhizinisi lakho lingasebenzisa nesoftware yokudlulisa ukuhlelela imisebenzi nokunciphisa isikhathi esithathayo ukuqedela ezinye izinhloso. Ngesoftware yokumaketha efanele yokudlulisa, ungathumela kalula imisebenzi ukuze uqiniseke ukuthi umsebenzi wenziwa ngokushesha nangempumelelo.
Empeleni, uthenga isikhathi sakho somsebenzi, futhi ubanike isikhathi esithe xaxa sokukhiqiza ekwenzeni amabhizinisi amasha.
Isizathu 7: Ukutholakala Kokuphepha Okungcono
Amabhizinisi amaningi ayesaba ukugenca noma izinsongo ze-cyber futhi kunesizathu esizwakalayo. Ubuchwepheshe benza lokhu kwesaba kube ngokoqobo. Akudlulanga usuku ngaphandle kwezindaba zokugenca okusha okushaqisayo. Ngokudabukisayo, isoftware iyona engcono kakhulu (ukuphela?) Yokuvikela.
Uma usebenzisa isoftware yamanje, enelayisense kakhulu noma imikhiqizo ye-SaaS yomuntu wesithathu ukuphatha imisebenzi yakho yansuku zonke, inkampani yakho isebenza ngokuphepha enkabeni yayo. Izinkampani zesoftware yokudlulisa otshala ukwethembela kwakho kuzona, kufanele ukwazise lokho kuthenjwa kakhulu. Idumela labo lincike ekugcineni idatha yakho; nemininingwane yamakhasimende akho iphephile.
Enye nje indlela ukutshala imali kwisoftware yokudlulisa okunengqondo kunengqondo njengesinqumo sesikhathi eside. Uyayandisa inkampani yakho ngenkathi uvikela izimpahla zakho, imibono nedatha yamakhasimende. Noma intengo yomkhiqizo wesoftware ethile yokudlulisa ibukeka iphakeme, kufanelekile ukutshalwa kwemali uma kusho ukuvikelwa. Imvamisa, ukufaka imali kwisoftware yokudlulisa efanele kungenza noma kuqede ibhizinisi.
Wonke amabhizinisi kufanele athathe izinyathelo ezifanele ukuvikela imininingwane eyimfihlo abayigcinayo. Ukutshala imali ezinhlelweni ezivikela idatha yamakhasimende ebucayi akuyona nje indlela yokunciphisa ubungozi bokwephulwa kwedatha, kepha futhi kungasebenza njengendawo yokuthengisa lapho ukhangisa ibhizinisi lakho kumakhasimende.
Isizathu 8: Ukuthengisa Okuthuthukisiwe
Yini enikeza ibhizinisi lakho ukukhula kakhulu, noma ngaphandle kwesoftware?
Ukumaketha okuhle kokudlulisa.
Into ehamba phambili ngobuchwepheshe yinzuzo ebunikezayo maqondana nokumaketha kokudlulisa. Kusuka ekukhushulweni kwezokuxhumana komphakathi kuya ezikhangisweni, izinsizakalo zesoftware yokudlulisela zikwenza ukwazi ukusabalalisa igama futhi uvuselele ukuqwashisa ngebhizinisi lakho ngokushesha.
Izinsizakalo eziningi zokumaketha zokudluliselwa zisetshenziswa izinkulungwane zabasebenzisi ukuphatha nokulawula amasu abo wokumaketha. Ngokutshala imali ezinhlelweni zokumaketha zokudlulisa ezinjengalezi, ungahambisa imizamo yakho yokumaketha okudlulisayo ngenkathi ngasikhathi sinye ukhuphula ukuvezwa kwakho.
Isizathu 9: Vula Iminyango Emisha
Ngobuchwepheshe obusha kuza amathuba amasha. Konke kuze kube manje kukhulunywa ngethuba lokukhula nentuthuko. Konke lokho kuyiqiniso.
Ubuchwepheshe buvula iminyango okungenzeka ubungacabangi ukuthi kungenzeka ebhizinisini lakho. Izinkampani ezisencwadini yazo yokuqala yokufika ekukhuleni kungenzeka zihlomule ngokutshala imali kuzinhlelo ezintsha zokumaketha zesoftware yokudlulisa kanye nabasunguli abazenzayo.
Ngaphandle kokutshalwa kwezimali kusoftware yokudlulisela, inkampani yakho ingavimba njengoba amasistimu ephelelwe yisikhathi, amakhasimende alahla umkhiqizo noma insiza yakho, noma amalungu eqembu eyeka ngenxa yokuhleleka.
Nali iqiniso; izinkampani nemikhiqizo eguqukayo kuphela engasinda ekuphakameni naphansi komnotho womhlaba. Lapho wenza izinqumo eziqhubekayo ngezimali zebhizinisi lakho, uzothola ukuthi ibhizinisi lakho ngeke livele nje; izochuma. Ngaphandle kokutshalwa kwemali kwesoftware yokudlulisela, inkampani yakho izokwehluleka ngoba ngeke ikwazi ukukhula.
Utshalomali lusenhliziyweni yawo wonke amabhizinisi. Njengomnikazi webhizinisi noma i-CEO, unquma ukuthi imali yakho iya kuphi. Ukuphela kwendlela amabhizinisi akhula ngayo lapho ukuphindaphinda kuyisimiso esiyisisekelo.
Kufanele wenze lesi simiso sethuba elizuzisa bonke libe yisisekelo lapho uthatha izinqumo; ikakhulukazi lapho utshala imali kwisoftware yokudlulisela. Njengoba ubuyela ebhodini lokudweba ukuqala konyaka omusha webhizinisi, cabanga ukuthi yikuphi ukutshalwa kwemali kwesoftware yokudlulisa okudingeka ukwenze ukuqhubekisela phambili ibhizinisi lakho.
Ukuthi lokho kusho iSoftware encane njengesevisi (SaaS) ukuthenga ukwenza lula amasistimu akho noma ukutshala imali ekubambisaneni kwesikhathi eside nenkampani yesoftware yokudlulisa, akunakuphikwa asikho isikhathi esinjengamanje sokubuza imibuzo enzima. Uma usukhombe lapho utshalomali lwakho kufanele luye khona, sekuyisikhathi sokwenza lokho kwenzeke.
Zama i-Referral Factory Mahhala
Ukudalula: Lo mbhalo ufaka izixhumanisi ezihambisanayo Indawo yokudlulisa.
Tags: lobulunguimboni yokudluliselaukumaketha kokudluliselwaisu lokumaketha lokudlulisaizizathu zokudluliselaukudluliselwa kwezimoto
Lapho ngineminyaka engama-33 ubudala impilo yami yashintsha ngokuphawulekayo. Ngithole izithiyo ezimbi ohambweni lwami lokuhweba. Ngibe nesivivinyo samahhala ezandleni zabezindaba futhi nganikezwa amathuba angaphansi kuka-10% okuqhubeka nohambo lwami lokuhweba. Ngemuva kwemizamo eminingi nezinsuku eziyi-114 esihogweni; Ngibuyele emuva. Angigcinanga ngokugcina inkampani yami eyakhethwa njengenkampani yezamabhizinisi ehamba phambili engama-332 e-USA ngo-2015 yi-Entrepreneur Magazine, ngabuya ngabuya ngamandla.
I-OwnBackup: Ukubuyiselwa Kwezinhlekelele, Ukuhlungwa Kwe-Sandbox, Kanye Nokugcinwa Kwedatha kwe-Salesforce